Nkenke machining Parts, CNC Parts, nkenke Ịrụcha Parts - WASSER
Ekwentị: + 86-18067150087
Professional mmepụta ezi machining na lathe maching nhazi nile di iche iche nke ihe, gụnyere Aluminium, Brass, Iron wdg; CNC nkenke akụkụ nhazi na mmepụta.
WASSER Tek Limited e establised na 2007 nke dị na Yuhang dist. Hangzhou obodo ahụ dị ka a maara na paradaịs elu ala. Anyị na-ewepụtara na-enye elu ngwaahịa, nkà na ụzụ support na ezigbo mgbe-ire ọrụ. Main ngwaahịa: ezi machining na lathe maching nhazi nile di iche iche nke ihe, gụnyere Aluminium, Brass, Iron wdg; CNC nkenke akụkụ nhazi na mmepụta.
The ụlọ ọrụ nwere elu mmepụta akụrụngwa, ọkachamara oru na ndị na nlezianya quality management usoro, na akara na ụkpụrụ nke ezi okwukwe management, elu àgwà na ezi price ụkpụrụ inye ahịa na zuru okè ọrụ. Ka ịmepụta uru maka ahịa bụ ihe mgbaru ọsọ anyị na-achụ. Anyị kwenyesiri ike na naanị a mmeri-mmeri ọnọdụ mmepe ntụziaka nke enterprise. Anyị ga, dị ka mgbe niile, na-ezi mma na ngwaahịa na ike dị chọrọ nke ndị ahịa anyị iji laghachi na nkwado na ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị.
Nkenke machined Parts
CNC nkenke machining
Ntak emi Họrọ US
Rich technical ahụmahụ
Strong mmepụta ike nke ngwaọrụ, na ogologo-okwu ìgwè technical ahụmahụ, na ịchụso mma na mma, na-enye ndị ahịa na ngwaahịa na ọrụ.
magburu onwe ngwaahịa
Professional mmepụta na nhazi nke aluminum, ọla kọpa, ígwè na ngwaọrụ ndị ọzọ nhazi, CNC finishing nhazi, ọtụtụ ahịa ekele na ude.
Ime Ọbụna More
Inye Quality Products, Magburu onwe Service, Mpi Prices na ozugbo nzipu. Anyị na ngwaahịa na-ere ọma ma na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ahịa. Anyị ụlọ ọrụ na-agbalị ịbụ onye mkpa suppliers na China.
Mee Gị Kpụzie Machine
Anyị na-atụ anya ịnụ olu gị, ma ị bụ a na-alọta ahịa ma ọ bụ onye ọhụrụ. Anyị na-atụ ị ga-ahụ ihe ị na-achọ ebe a, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, biko kpọtụrụ anyị ozugbo. Anyị ji onwe anyị on top notch ahịa ọrụ na omume. Daalụ maka azụmahịa gị na nkwado!
Adress: Yuhang dist, Hangzhou obodo
Guide - Apụta Products - Sitemap - Mobile Site
CNC machining Parts , nkenke nhazi Parts , Precise Machining Parts, Machining Parts, nkenke Okpomọkụ Ọgwụgwọ Usoro Parts , CNC machined Parts ,